'Olona mahafinaritra sy mahatalanjona izy': ny renin'i Addison Rae dia niaro ny sakaizan'ny zanany vavy, Omer Fedi, tamin'ny fankahalana an-tserasera - Pop-Kolontsaina
Tao anaty fanehoankevitra iray teo ambany lahatsoratra Instagram, Sheri Easterling, renin'i Addison Rae, dia niaro ny sakaizan'i Rae, Omer Fedi.
Addison Rae, fantatry ny TikTok fanta-daza indrindra amin'ny fandihizany sy ny atiny isan-karazany, dia kasaina hanao ny laharana voalohany amin'ny 'He All That,' izay havoaka ny 27 aogositra izao.
Addison Rae dia nanamafy ny fifandraisany tamin'ny mpitendry gitara an'i Machine Gun Kelly, Omer Fedi, tamina tantara fohy Instagram momba ny oroka roa. Nizara sary tamin'ny tantarany raozy mavokely ihany koa i Rae raha nanisy marika an'i Fedi teo an-joro.
Nizara ny horonantsary tamin'ny tantarany Instagram ihany koa i Omer Fedi. Ny tsaho momba ny fiarahan'i Rae sy Fedi dia nanomboka voalohany rehefa hita ny roa taorian'ny fampisehoana nataon'ny Machine Gun Kelly tany California ny 19 Jona. Fedi dia nizara ny sariny sy Rae nifandray tànana ihany koa teo aloha. Nofoanana haingana ilay lahatsoratra taorian'izay.
Ny lahatsoratra amin'izao fotoana izao dia tsy hita izay nanamarihan'i Sheri Esterling. Na izany aza, mpampiasa tiktokinsiders Instagram dia nizara pikantsarin'ilay fanehoan-kevitra:
'Tena olona mahafinaritra sy mahatalanjona izy, ary mampamiratra ny fanahiny. Tia azy.'
Lahatsoratra iray nozarain'i tiktokinsiders (@tiktokinsiders)
Naneho hevitra ireo mpankafy ny fanehoan-kevitry ny renin'i Addison Rae momba an'i Fedi
Taorian'ny nizarana ny lahatsoratra tao amin'ny Instagram, mpampiasa maro no naneho hevitra momba an'i Sheri Esterling miaro an'i Omer Fedi, fa tsy i Bryce Hall rehefa niaraka izy sy Addison Rae.
Ny lahatsoratr'i tiktokinsiders dia nahazo likes 36 arivo sy fanehoan-kevitra 740.
Mpampiasa iray naneho hevitra:
'Tsy nilaza na inona na inona momba an'i Bryce toy izao izy ...'
Mpampiasa iray hafa nanambara:
'Moa ve tsy navelan'izy ireo hankahala anà tsaho diso i Bryce ary tiany ny lahatsoratra ratsy momba azy.'
pikantsary avy amin'ny instagram
Lahatsoratra zarain'i Addison Rae (@addisonraee)
Ny toe-javatra nahatafiditra an'i Bryce Hall dia tamin'ny taona 2018, izay izy sy ny namany dia nilaza fa nanao herisetra tamin'i YouTuber Zach Clayton. Nanambara i Clayton fa ny sakaizan'i Addison Rae dia efa 'nandre zavatra nolazain'i [Clayton] tamin'ilay zazavavy', ka izany no nahatonga ilay fanafihana. Tsy mbola nisy fanamafisana na Hall io na ireo mpiara-miasa aminy.
Na i Addison Rae na ny reniny dia samy tsy nisy naneho hevitra na niaro ny raharaha fifanolanana nataon'i Hall. Vao tsy ela akory izay i Fedi dia naneho hevitra momba ilay lahatsoratra Instagram etsy ambony nataon'i Addison Rae:
Ny fanehoan-kevitr'i Fedi dia nahazo fankafizana telo arivo sy fanehoan-kevitra 220. Tsy naneho hevitra bebe kokoa momba ny fifandraisan'ny zanany vavy Addison Rae i Sheri Esterling amin'izao fotoana izao.
Vakio ihany koa: 'Hotsipiko ianao': KSI manamboatra ny fahaizan'i Austin McBroom amin'ny ady totohondry rehefa milaza azy ho 'fanafanana' alohan'ny Jake Paul
mihetsika haingana be ve aho amin'ny fifandraisako
ny fomba tsy hiraharaha ny hafa
maninona no tiako be izy
tsy haiko izay tiako hatao amin'ny fiainana